Ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany Malta dia mora kokoa ho an'ny mpizahatany avy any Etazonia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Malta » Ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany Malta dia mora kokoa ho an'ny mpizahatany avy any Etazonia
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Malta • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Mora kokoa ny manao fizahan-tany any Malta ho an'ireo mpizahatany avy any Etazonia - hita eto i Valletta
Ny zoma 23 jolay 2021, ny manampahefana fizahan-tany any Malta dia nanao sonia fifanarahana miaraka amin'i Verifly izay mikendry ny hanome vahaolana maimaimpoana ho an'ireo mpizahatany avy any Etazonia, mankany Malta. Ny famolavolana VeriFLY-centric privacy dia manome antoka fa voatahiry ny angon-drakitry ny mpampiasa ary ampiasaina amin'ny tanjona sy fe-potoana ilaina fotsiny mba hanomezana fahafaham-po ny fitakiana dia.
Ireo mpitsangatsangana avy any Etazonia mankany Malta dia hanana fotoana hanamarinana ny fahasalamany ary hanome antontan-taratasy hafa.
Ny fampiharana VeriFLY dia manampy amin'ny fampandehanana ny vaksinin'ny COVID-19, ny fanamarinana ny antontan-taratasy ary mampiseho ny valiny amin'ny fomba mazava sy tia namana.
VeriFLY dia manana mpampiasa mavitrika mihoatra ny 1.5 tapitrisa manerantany.
Ambonin'izany, ireo mpampiasa VeriFLY dia hitazona fifehezana henjana momba ny fomba, oviana ary amin'iza no izarana ny mombamomba azy ireo. Ankehitriny miaraka amin'ireo mpampiasa maherin'ny 1.5 tapitrisa mavitrika eran'izao tontolo izao, VeriFLY no kitapom-bolongana nomerika voalohany eran'izao tontolo izao noforonina mba hanampiana ireo mpandeha sy ireo mpanatrika hetsika haingana sy azo antoka fa mahafeno ny fepetra takian'ny COVID-19.
Ireo mpitsangatsangana avy any Etazonia mankany Malta dia hanana fotoana hanamarinana ny fahasalamany ary hanome antonta antontan-taratasy hafa, araka izay takian'ireo manampahefana Maltese Health, amin'ny alàlan'ny fampiharana VeriFLY izay manampy amin'ny fanamafisana ny vaksinin'ny COVID-19, ny fanamafisana ny antontan-taratasy ary mampiseho ny valiny mazava. , fomba tia namana.
Aorian'ny famoronana mombamomba azo antoka ao amin'ny findainy, ny mpandeha dia hampakatra fampahalalana momba ny vaksinina sy antontan-taratasy hafa arak'izay takiana mivantana ao amin'ny fampiharana VeriFLY. Ny fampiharana VeriFLY dia hanamarina fa ny mombamomba ny mpandeha dia mifanaraka amin'ny fepetra napetrak'i Malta ary mampiseho hafatra tsotra na tsy fahombiazana. Aorian'izany, ny mpandeha dia hotarihina hameno ny endrika mpandeha mpandeha hiditra ao Malta.
Ny rindranasa VeriFLY, misy ao amin'ny Google Play sy ny Apple App Store, dia hahafahan'ny mpampiasa mampihetsika ny pass "Trip to Malta", izay mameno ny fepetra takiana hiditra ao Malta, voalamina ao anaty lisitra mora raisin'ny mpampiasa, aorian'ny nahavitana ireo mari-pahaizana ilaina rehetra.
“Ity fifanarahana ity dia mampiseho ny fahafahan'i Malta manitsy haingana amin'ireo fanamby vaovao mifandraika amin'ny dia. Ny fampiharana VeriFLY dia ho fitaovana lehibe hiantohana ny fandriam-pahalemana ho an'ny Amerikanina sy ny fahasalamam-bahoaka Maltese amin'ny ankapobeny. Hanohy hiasa mafy izahay hanome toky fa ny sehatry ny fizahan-tany eo an-toerana dia manohy ny làlam-panarenana amin'ny fomba maharitra sy tompon'andraikitra, "hoy ny minisitry ny fizahan-tany sy ny mpanjifa Clayton Bartolo.
“Faly ny MTA fa nahatratra ity fifanarahana ity tamin'ny VeriFLY, izay hanamora ny fitsidihan'ny mpizahatany avy any Etazonia an'i Malta, amin'ny alàlan'ny fanomezana fivarotana tokana ho an'ireo mpizahatany handefa ny antontan-taratasy ilaina rehetra alohan'ny hiaingan'izy ireo. Midika izany fa hiala am-pilaminana ny mpizahatany avy any amin'ny seranam-piaramanidina niaviany, satria fantany fa milamina daholo ny antontan-taratasin'izy ireo, ka manomboka ny fialan-tsasatra fialan-tsasany manomboka amin'ny fotoana hidirany amin'ny fiaramanidina, "hoy ny Tale jeneralin'ny MTA, Johann Buttigieg, ary nanampy izany ity fifanarahana ity, ny manampahefana maltese dia manohana amin'ny fomba ofisialy ny fampiasana ny VeriFLY hahazoana fidirana mahomby amin'ny firenena.